यस कारण अत्यन्तै कमजोर भए प्रदेश नं-२ मा ठूला दल ! | suryakhabar.com
Home पु.समाचार यस कारण अत्यन्तै कमजोर भए प्रदेश नं-२ मा ठूला दल !
on: २९ मंसिर २०७४, शुक्रबार ०९:५० In: पु.समाचारTags: यस कारण अत्यन्तै कमजोर भए प्रदेश नं-२ मा ठूला दल !No Comments
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले देशव्यापीरुपमा दुई तिहाइ स्थानमा विजयी हासिल गरे पनि प्रदेश नं २ मा भने सोचेजस्तो नजिता निकाल्न सकेन ।
कूल ३२ प्रतिनिधिसभा र ६४ प्रदेशसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा उक्त प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा संघीय समाजवादी फोरमले नौ र राष्ट्रिय जनता पार्टीले १० स्थानमा विजयी भए । वाम गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा (एमाले) दुई र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पाँच तथा काँग्रेसलाई छ स्थानमा मात्रै चित्त बुझाउनुप¥यो ।
प्रदेश नं २ मा मधेश केन्द्रित दलले प्राप्त गरेको मत परिणामलाई लिएर राजनीतिकरुपमा विभिन्न खालका टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह अहिले मुलुकभर आएको मत परिणाम संविधान संशोधन र अनुमोदन गर्नेबीचको स्वभाविक परिणाम भएको बताउछन् ।
उहाँले आगामी राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक समृद्धिलाई ध्यान दिनुपर्ने र मधेशको समृद्धि पनि त्यसैमा पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सबै दललाई भेदभाव नगरी जनताले मत दिएकाले त्यसको कदर गर्नुपर्ने उनको जोड छ । मधेश केन्द्रित दलले देशलाई केन्द्रमा राखेर मधेशका विषय उठाउनुपर्ने धेरैको विश्लेषण छ ।
Tags: यस कारण अत्यन्तै कमजोर भए प्रदेश नं-२ मा ठूला दल !
काँग्रेस जनताको म्याण्डेट अनुसार प्रतिपक्षमा बस्छ : नेता सिंह
२९ मंसिर २०७४, शुक्रबार ०९:५०